Covid-19 Arkiver - NorSom News
Norsomnews - 12. april 2022
Norsomnews - 10. april 2022
7 xaaladood oo Nooc cusub (XE) oo korona ah oo lagu arkay Norway.
Mohamed Bashiir - 10. april 2022
Norsomnews - 6. april 2022
Dr. Abdirashid( Cilmibaare): Talaalku wuxuu muhiim gaar ah u yahay dadka qaba xanuunaddan.
Norsomnews - 5. april 2022
90 mar ayuu qaatay irbadda talaalka corona: Si uu iibiyo warqada cadeynta talaalka.
Norsomnews - 4. april 2022
Daawo: Feyruskii corona miyuu ka dhamaaday Norway, xagee hada wax marayaan, maxaase nala gudboon?.
Norsomnews - 21. mars 2022
FHI: Haweenka uurka leh iyo talaalka feyruska corona-( Talooyin).
Norsomnews - 18. februar 2022
Dowlada oo soo rogtay talaabooyinka cusub ee Corona la xiriira.
Norsomnews - 12. november 2021
Wararkii ugu danbeeyay ee Norway iyo awaamiirta dowlada.
Norsomnews - 29. august 2021
Daawo wararkii ugu danbeeyay iyo go´aanada dowlada Norway oo AF-SOOMAALI AH
Norsomnews - 14. august 2021
Norsomnews - 2. august 2021
Norsomnews - 6. juli 2021
Norsomnews - 10. juni 2021
Norsomnews - 7. juni 2021
(Daawo) Dowlada qaabkan ayaan wadanka u fureynaa: Xeerarka cusub
Norsomnews - 27. mai 2021
Daawo R.W Solberg: Qaabkan iyo xiligan ayay dowladu qorsheysay in dib loogu furo wadanka.
Norsomnews - 22. mai 2021